Xaflada Career: Ka dib markii Adrienne Koutouan, Gohou Digbeu Tie, ayaa ku dhawaaqay Aicha Kone ... - TELES Relay
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Xirfadda Shaqada: Ka dib Adrienne Koutouan, Gohou, Digbeu Tie, Aïcha Koné ...
Dabaaldegga Shaqada: Ka dib Adrienne Koutouan, Gohou, Digbeu Tie, Aïcha Koné ...
Xilliyadii ugu dambeeyay, waxaa jiray soo bandhigyo muuqaal ah oo mawduuca ugu muhiimsan uu yahay dabaaldegga sanadaha shaqooyinka. Taas oo u muuqata in ay noqoto helitaanka cusub ee heesayaasha, muusikada iyo majaajilada si ay u muujiyaan xirfaddooda. Waxayna si fiican u shaqeysaa qaar.
Sidoo kale akhri: Paris: Habeen weyn oo Afrikaan ah ayaa diyaar u ah DJ Arafat, Passi ... iyo Djibril Cisse oo u ciyaara
Musically, oo dhan riwaayada ee muddooyinkii dhowaa qabtay waddammo fikradda. Waxaan aragnay, huddle, ka 60ans mustaqbalkooda Manu Bibongo, 30ans mustaqbalkooda David Tayorault, xirfadiisa Hope 20ans 2000, Yodé Siro, System Magic, 25ans in Soum Bill iyo Kajeem, ee 10ans Serge Beynaud iyo DJ Kedjevara iyo kuwo kale oo badan.
Sidoo kale akhri: Ka dib markii uu ku guuleystey hal nin, Ambassador Agalawal wuxuu ku biirayaa Joel iyo Le Magnific ee Faransiiska ...
magacyada Big sida diva ee Aicha Kone, Chantal Taiba, makaanikada The Lago Paulin iyo kuwa kale waxaa lagu dhawaaqi lahaa in aan waxba ahayn this.
Laakiin mid ah humorists iyo majaajilaystayaasha, fikradda lahaa dan lahayn ilaa dhowaan la waxqabadka qarxa ee Ixtifaalka of 30ans mustaqbalkiisa Adrienne Koutouan.
Sidoo kale akhri: Davido ee Chioma: "Haddii aanan haysan lacag, ma aad u qoslin sida aniga ila"
Bandhigaas oo ku sii jiri doona dhaqdhaqaaqyada Ivorian iyo farshaxanka 7e Ivorian. Ka dib, waxaan ku dhawaaqi doonaa dad caan ah oo kale oo berriga ah kuwaas oo sidoo kale isku tuuraya biyaha si ay u dabaaldegaan sannad-guuradooda shaqo. Sidaasi darteed, waxaa lagu dhawaaqay Gohou Michel, Digbeu Tie iyo qaar ka mid ah wali qalloocinaya waqtigooda hooska ganacsigooda.
Xaqiiqdii waa dadaal weyn oo lagu dabaaldegayo mid ka mid ah farshaxanka sanadka iyo xirfadlaha. Laakiin taasi maahan inay ahaato fadeexad keliya. Oo sidaas darteed farshaxannadu waa inay yaqaanaan sida loo doorto dhiirrigeliyaha saxda ah, midka loo baahan yahay isagoo dhigaya shaqadiisa iyo xirfadkiisa. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay xirfadahooda iyo caqligooda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/people/actu/celebration-de-carriere-apres-adrienne-koutouan-gohou-digbeu-cravate-aicha-kone-annonces